MB 2015 Novambra - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Suisse
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2015 Novambra
Indraindray isika dia mankamin'ny fankalazana ny Noely amin'ny fahatongavan'Ny Zanak'Andriamanitra tamim-pahazotoana be loatra ka namela ny Advent hipetraka amin'ny seza aoriana, izany hoe ny fotoana nanombohan'ny taom-piangonana kristiana. Ny Alahady efatra amin'ny Advento dia manomboka amin'ity taona 29 Novambra ity ary manambara ny Noely, ilay fetin'ny fahaterahan'i Jesosy Kristy. Ny teny hoe "Advent" dia nalaina avy amin'ny adventus latinina ary midika hoe zavatra toy ny "fahatongavana" na "fahatongavana". Mandritra ny Advento dia mankalaza ny "fahatongavan'i Jesosy" telo (matetika amin'ny filaharana mifanohitra): ny ho avy (fiverenan'i Jesosy), ny ankehitriny (amin'ny Fanahy Masina) ary ny lasa (ny fahatongavan'i Jesosy nofo / teraka).
Ho azontsika tsara kokoa ny dikan’ny Advento raha mandinika ny fifandraisan’ireo fahatongavana telo ireo isika. Hoy ny mpanoratra ny Taratasy ho an’ny Hebreo: “Jesosy Kristy omaly sy anio ary tsy miova mandrakizay” (Hebreo 1.3,8). Tonga tahaka ny olona tonga nofo i Jesoa (omaly), velona amin’ny alalan’ny Fanahy Masina izay ao anatintsika (androany) ary hiverina ho Mpanjakan’ny mpanjaka rehetra sy Tompon’ny tompo rehetra (mandrakizay). Fomba iray hafa hijerena izany ny momba ny fanjakan’Andriamanitra. Ny nahatongavan’i Jesosy ho nofo dia nitondra ny fanjakan’Andriamanitra ho an’ny olombelona (omaly); izy mihitsy no manasa ny mpino hiditra amin’izany fanjakana izany sy handray anjara amin’izany (anio); ary rehefa miverina izy, dia hanambara ny fanjakan’Andriamanitra efa nisy taloha tamin’ny olombelona rehetra (mandrakizay).
Nampiasa fanoharana maromaro i Jesoa mba hanazavana ny fanjakana izay hatsanganany: ny fanoharana ny amin’ny voa naniry tao anatin’ny fahanginana sy tsy hita maso (Marka. 4,26-29), ny an’ny voantsinapy, izay mipoitra avy amin’ny voa kely iray ary mitombo ho kirihitra lehibe (Markus). 4,30-32), ary koa ny masirasira, izay masirasira ny koba rehetra (Matio 13,33). Ireo fanoharana ireo dia mampiseho fa ny fanjakan’Andriamanitra dia nentina tety an-tany tamin’ny fahatongavan’i Jesosy ho nofo, ary tena mbola mitohy hatramin’izao. Hoy koa i Jesosy: “Raha ny Fanahin’Andriamanitra no amoahako ny fanahy ratsy [izay nataony], dia efa tonga aminareo ny fanjakan’Andriamanitra.” ( Matio 12,28; Lioka 11,20). Eo ny fanjakan’Andriamanitra, hoy izy, ary voarakitra an-tsoratra ny porofo momba izany tamin’ny fandroahany demonia sy ny asa tsara hafa nataon’ny fiangonana.
Ny herin'Andriamanitra dia miseho tsy an-kijanona amin'ny alàlan'ny mpino miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra marina. Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana, izy omaly, anio ary mandrakizay. Tahaka ny nanatrehan'ny fanjakan'Andriamanitra ny asan'i Jesosy ara-panahy dia eo koa izany amin'ny asa ara-panahy an'ny fiangonany (na dia mbola tsy lavorary aza). Mipetraka miaraka amintsika Jesosy Mpanjaka; mitoetra ao amintsika ny heriny ara-panahy, na dia mbola tsy mandaitra tanteraka aza ny fanjakany. Martin Luther dia nanao ny fampitahana fa nofatoran'i Jesosy i satana, na dia teo amin'ny rojo lava aza: «[...] tsy afaka manao mihoatra noho ny alika ratsy amin'ny rojo vy izy [Satana]; mety mivovo izy, mihazakazaka mandroso sy mandrotsa tena amin'ny rojo vy. "
Ny fanjakan'Andriamanitra dia ho tonga amin'ny fahatanterahana rehetra - izany no "mandrakizay" antenaintsika. Fantatsika fa tsy afaka manova an'izao tontolo izao isika eto sy ankehitriny, na manao ahoana na manao ahoana fiezahantsika hanome taratra an'i Jesosy amin'ny fomba fiainantsika. Jesosy irery no mahavita an'io ary hataony amin'ny voninahitra rehetra amin'ny fiverenany. Raha toa ka efa misy ny fanjakan'Andriamanitra dia ho tonga amin'ny fahatanterahany tanteraka amin'ny ho avy izany. Raha mbola takona afenina ankehitriny izy io dia hambara tanteraka amin'ny fiverenan'i Jesosy.
Niresaka matetika momba ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny heviny ho avy i Paoly. Nampitandrina ny amin’izay rehetra mety hisakana antsika tsy “handova ny fanjakan’Andriamanitra” izy (1. Korintiana 6,9-10 sy 15,50; Galatianina 5,21; Efesianina 5,5). Araka ny hita matetika amin’ireo teny nofidiny, dia nino hatrany izy fa ho tanteraka ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny faran’izao tontolo izao (1 Tes. 2,12; 2Tesaloniana 1,5; Kolosiana 4,11; 2. Timoty 4,2 ary 18). Fantany koa anefa fa na aiza na aiza misy an’i Jesosy, dia efa misy ny fanjakany, na dia ao amin’ny “tontolo ratsy ankehitriny” aza, araka ny niantsoany azy io. Koa satria mitoetra ao anatintsika i Jesoa eto sy ankehitriny, dia efa eo sahady ny fanjakan’Andriamanitra, ary araka ny voalazan’i Paoly dia efa manana zom-pirenena ao amin’ny fanjakan’ny lanitra isika (Filipiana). 3,20).
Ny Advent koa dia resahina momba ny famonjena antsika, izay resahina ao amin'ny Testamenta Vaovao amin'ny fe-potoana telo: ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy. Ny famonjena efa noraisintsika dia maneho ny lasa. Nataon'i Jesosy tamin'ny fiaviany voalohany - tamin'ny alàlan'ny fiainany, fahafatesany, fitsanganany tamin'ny maty ary fiakarany ho any an-danitra. Miaina ny ankehitriny isika ankehitriny rehefa mitoetra ao amintsika Jesosy ary miantso antsika handray anjara amin'ny asany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra (fanjakan'ny lanitra). Ny ho avy dia mijoro amin'ny fahatanterahana tonga lafatra ny fanavotana izay ho tonga amintsika rehefa hiverina Jesosy mba ho hitan'ny rehetra ary Andriamanitra dia ho izy rehetra.
Mahaliana ny manamarika fa ny Baiboly dia manantitrantitra ny fisehoan’i Jesosy hita maso tamin’ny fiaviany voalohany sy farany. Teo anelanelan’ny “omaly” sy “mandrakizay”, ny fiavian’i Jesosy dia tsy hita maso, satria tsy hitantsika mandehandeha tahaka ireo niaina tamin’ny taonjato voalohany. Fa satria ambasadaoron'i Kristy izahay ankehitriny (2. Korintiana 5,20), antsoina hijoro amin’ny maha-zava-misy an’i Kristy sy ny fanjakany isika. Na dia tsy hita maso aza i Jesosy, dia fantatsika fa momba antsika Izy ary tsy hahafoy antsika na oviana na oviana. Afaka mahafantatra azy ao anatintsika ny mpiara-belona amintsika. Manao fanamby isika mba handatsaka sombiny amin’ny voninahitry ny fanjakana amin’ny famelana ny vokatry ny Fanahy Masina hirotsaka amintsika sy amin’ny fitandremana ny didin’i Jesosy vaovao hifankatiavantsika.3,34- iray).
Rehefa fantatsika fa ny Advento dia eo afovoany, Jesosy dia omaly, anio, ary mandrakizay, dia azontsika atao tsara kokoa ny mahatakatra ny antony nentim-paharazana amin'ny endrika labozia efatra izay mialoha ny fotoanan'ny fiavian'ny Tompo: fanantenana, Fiadanana, fifaliana ary fitiavana. Amin'ny maha-Mesia niresahan'ny mpaminany azy, dia i Jesosy no tena endrik'ilay fanantenana nanome hery ny olon'Andriamanitra. Tsy tonga ho mpiady na mpanjaka handresy izy, fa ho Andrian'ny fandriampahalemana hanehoana fa fikasan'Andriamanitra ny hitondra fandriampahalemana. Ny tanjon'ny fifaliana dia manondro ny fiandrasana am-pifaliana ny fahaterahan'ny Mpamonjy antsika. Ny fitiavana no maha-Andriamanitra azy. Ilay Fitiavana dia tia antsika omaly (talohan'ny nanorenana an'izao tontolo izao) ary manohy manao izany (tsirairay sy amin'ny fomba akaiky) na anio na ho mandrakizay.
Mivavaka aho mba ho feno ny fanantenan'i Jesosy, fiadanam-po sy fifaliana ho anao ny vanim-potoanan'ny Fiaviana ary hampahatsiahy anao isan'andro ny fitiavany anao ny Fanahy Masina.
Matoky an'i Jesosy omaly sy anio ary mandrakizay,
Fiaviana: Jesosy omaly, anio ary mandrakizay